IBSA EJJENNOO QEERROO WALLOO |
Home Afaan Oromoo IBSA EJJENNOO QEERROO WALLOO
Nuti Qeerroon Bilisummaa saba Oromoo Walloo gidiraaf roorrifama uummatni keenya keessatti kufee jiru teenyee ijaan ilaaluu fi gurraan dhaga’uu nuffineerra. Akka uummataatti roorroo uummata Oromoo Oromiyaa keessaa fi daraarama ilmaan Oromoo yeroo arginuuf dhageenyu onnee namummaa keenyaaf ribuu keessa keenyaatu nu dhikkifata. Qabsoo Qeerroowwaan Oromoo lubbuu isaanii qaalii itti wareeganii qabsoo Oromootti xumura gochuuf taasisaa turanis harka leelliftoota minilikii fi ilmaan nafxanyaatti erga dabarfamee kunoo waggaa lakkoofsiseera. Nuti Qeerroof Qarreen Oromoo Walloos akkasumas uummatni godina keenyaa erga roorroo hamtuu keessatti kufnee oollee bullee jirra. Utuu jiraachuu beeknuu jiraachuu dadhabnee ganamaaf galgala akka hattuutti humna waraana sadii’in adamfamaa jirra. Humnootni nu adamsan kenneenis
Hidhattoota Affarii fi
liyyuu Haayilii naannoo Amaaraati.
Humnootni kunneen sadan gartee maanfiyaa biltsiginnaa kanneen hiddaaf dhiigaan uummata Oromoo Walloo irraa hin dhalatiiniif kanneen eenyummaa isaanii dagatanii fayyidaa dhuunfaaf iddoo kennaniin bobbaafamanii akka nama kuruphee ykn bosonuu adamsuutti nu adamsaa jiru. Humni godinicha bulchaa jirus humnoota kana utubuudhaan namoota/Qeerroo sooshaal midiyaa irratti dhimma siyaasaa osoo hin taane, dhimma Oromummaaf eenyummaa Walloo dagaagsuuf tattafatan jumlaan guuree hidhaatti naqaa jira. Kaan immoo manaaf qabeenya irratti gubee beelaaf saaxilaa jiraachuu namni kamuu bareechee beeka. Humnootni sadeen olitti eeraman kun uummata Oromoo Walloo dinagdeedhaanis dadhabsiisaa jiraachuu rra darbee meeshaa uummatni keenya eeyyama itti baasee gibira bara baraan itti kaffalu irraa hiikaa jira. Kunis yeroo uummatni Amaaraa meeshaa gurguddaa hidhatee mana bataskaanaa deemuu fi uummatni Affar sinipperoota gurguddaa leenji’aa jiran kanatti uummata Oromoo Walloo irraa immoo meeshaa inni qabu hiikaa jiraachuu namni ijaaf gurra qabu guyyuun argaa oola. Kanaafuu nus Qeerroon Oromoo Walloo yeroo adda addaatti bulchitoota aanaas ta’u godinichaa gaafannee gaaffii keenyaaf deebiin kennamu hidhaaf doorsisa ta’ee jira. Kana immoo callifnee ilaaluun sodaa osoo hin taane paartiin PPE kun yoom dogoggora isaa beekee nu dhiisa jennee obsaa turre. Amma garuu kunoo obsaaf finiina keenya fixannee sagalee tokkoon Galaana Warraqsa Uummataatti karaa kam iyyuu hirmaachuuf qophiidha. Yeroon qabnus kunoo amma. Haaluma kanaan ibsa kana baasuun kan nu barbaachiiseef rakkoon uummata Oromoo guutuu Oromiyaa fi rakkooniif daraaraan Walloo irra ga’aa jiru rakkoo keenya waan taheef. Ibsa Waloo Qeerroof Qarreen godina Oromoo Walloo kunis kanneen kanaa gadiiti.
Walloo hanga Raayyaatti uummata keenya daguugamaa jiruuf GWU kanaan bilisa ni baafna
Maqaa daldaltoota godina kamiseen Qeerroowwan yakka tokko malee hidhaman falminee bilisa ni baafna
Ajjeechaa jumlaa uummata Dawwee harawwaaf itti gaafatamaa kan fudhatan Ahimad Hasanii fi Ammii Muhee ta’uuu hubachiifna
Qaama RIB qabatee uummata keessa deemuun uummata keenya daraaraa jiru hatattaman akka of qusatu gaafanna
Meeshaan uummata keenyarraa hiikaman hatattaman deebifamanii qaamni meeshaa uummataa saame kun to’annoo jala akka oolfamu
RIB Guyyaa Waxabajjii 4, 2020 Aanaa jiillee dhumugaatti Moohammad Tuuttuu ajjesee fi qaamni RIB uummata keessa bobbaase hatattaman akka seeratti dhihaatu. Ajjeechaa jumlaa uummata Gujii, Wallaggaaf naannoolee Oromiyaa biroo keessatti geggeffamaa jiruuf hatattaman Abiyyii Ahimad Alii seera idil Addunyaatti akka dhihaatu.
Sirni PPE guutummaa guututti akka diigamu
Maqaa koronaan uummata hidhaatti guuruun akka dhaabbatu
Addisuu Araggaa, Taayyee Dandanaa fi fakkaattotni isaanii daddafiin haa to’ataman
Barreessaa waajjira ABO damee Walloo kan magaalaa Kamisee dabalate Qeerroon badii tokko malee hidhamanii jiran hiikaa jechuu qofa osoo hin taane GWU geggeessinee mana hidhaa PPE keessaa uummata Oromoo hunda yaasuuf qophii barbaachisu xumurree jirra
Uummatni keenya walloo yeroo murtooftuu kanatti meeshaa harka isaatii qabutti rasaasaaf waantoota barbaachisu akka guuttatuuf karaa kam iyyuu nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo hubannoo cimsee ni kenninaaf
Caasaalee sirna Biltsiginnaa gorsa fudhatanii gara GWU deebi’an ni gorsina. Yoo didanii uummata miidhuuf akkuma duraa fiigu taheef tarkaanfii irratti fudhachuuf qophiidha
Akka aanaalee godina Walloo torbanutti uummatni keenya ergaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi errgaa ajajoota WBO irraa darban hordofnee qophii keenya xumuruu qabna.
Abbootii amantii yeroo uummatni keenya daraaramu taa’anii ilaalanii gaafa warraqsi Qeerroo bobaatu immoo quraanaaf sagalee rabbii fudhatanii maqaa jaarsummaan nutti dhufan asumaan akka dhaabbatan gaafanna
Millshoota, poolisootaaf kanneen godina keenya keessatti maqaa hidhataa jedhuun meeshaa qabattanii jirtan hunduu yeroo isin dammaqtanii lakkofsa meeshichaa jijjiruun gara kan ofii keessatti naanneffattan guyyaan isaa amma
Poolisootni hiddaaf dhiigaan Oromoo Walloo irraa dhalattaniis yeroo isin meeshaa harka keessan jiru karaa dandeessan jechuun bifa mijateen of harkaa baaftanii qabeenya dhuunfaa keessanii godhattan daqiiqaan ishee kunooti
Meeshaan waraanaa man kuusaa aanaaf godinaa irra jiru fe’amee gara naannoo biraa akka hin deemnee fi yeroo WGU eegalu immoo uummataaf Qeerroo duraa maqtanii uummata keessan akka hidhachiiftan jenna. Yoo kan mataa jabaattan tahes rakkoof akka saaxilamtan beekuu qabdu
Yeroo fiishkaan xumuraa afuufamu geessee waan jirtuuf uummatniif qeerroon bilisummaa Oromoo dammaqaa naannoo jirtan to’adhaa. Walumaagalatti roorroo uummatni keenya keessatti kufee jiru irraa qolannee mirga uummata keenyaa kabachiisuudhaaf nus Qeerroon Bilisummaa Oromoo Walloo hundi keenyayyuu WGUtti makamnee biyyaaf biyyoo keenya kabachiisuuf ajaja hogganaa Qeerroo Biludummaa Oromoo fi ajaja Waraana Bilisummaa Oromoo hojiitti hiikuuf qophii xumuruu keenya asumaan hubachiifna!!
Waxabajjii 6, 2020
Previous articleGuyyoo Wariyoo Abbaa Jirma Misilaa Oromon qabdu
Next articleConflict and COVID-19 adds up to a crisis within a crisis in Libya
Horoo Buloo Hoffoloo June 9, 2020 At 1:58 am
Qeerroon Caasaa Sirna Gadaa Keessa Jaarmaa Jiru Malee Jaarmaa Daldalaan Siyaasaa Bobbaasuu fii Galchu Tahuu Hin Qabu.
Micciir August 1, 2020 At 2:22 pm
@Horoo Buloo Hoffoloo,
Waan ta’uu hawwitu qofa dubbatuun faayidaa hin qabu, yoo hojiidhaan agarsiiftee ykn kanaan dura akkaataa itti hojjetamaa ture keessa beekte malee.
Jaarmiyaa walaba tahe isa kamtu sirna Abbaa Gadaa irratti ijaaramee jira amma biyya keecha? Qeerroon amma baantu kana dursa dhaaba siyaasaa kam akka caasaa isaa hundeesse quba qabdaa? Mee dursa isa qoradhu, homaa miti boodarra midia irraa dhageesses Qeerroon Bilisummaa Oromoo ijaarsa abbaa qabudha. ABOtu ijaare. Kana jaallannus jibbinus liqimsuudha, Ati amanuu dhabdeef dhugaa bakka ishee hin hanqattu!